Ugqirha Ngubani: Abadlali abasibhozo abaDlala uGqirha olandelayo - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Ugqirha Ngubani: Abadlali abasibhozo abaDlala uGqirha olandelayo
Ugqirha Ngubani: Abadlali abasibhozo abaDlala uGqirha olandelayo
Umlingisi waseBritane u-Helena Bonham Carter. (Ifoto: Jack Taylor / AFP / Getty Izithombe)
Ngeendaba zokuba u-2018 uza kubona umboniso omtsha we-BBC yesayensi-fiction uthotho Ugqirha Ngubani, abalandeli abaninzi sele beqalisile ukuthelekelela ukuba umtshayelo omtsha uza kutshayela kutshintsho olukhulu.
Umtshayelo ekuthethwa ngawo, Ukusasaza UChris Chibnall ongena endaweni kaSteven Moffat, uqinisekile ukuzisa ubuso obutsha ukubuyisela uPeter Capaldi njengeNkosi yeXesha kunye namahemuhemu okwangoku abonisa ukuba Imidlalo yeethrone UMaisie Williams okanye uHarry Potter uEmma Watson unokuba nguye uGqirha olandelayo.
Nanga amanye amagama esingathanda ukusongeza kumxube ukuze siwuqwalasele.
8. UAmy Schumer
Mhlawumbi oyena mfazi uhlekisayo emhlabeni okwangoku.
[ikhuselwe-iframe id = 615398baa57882f55a78fc892cbfefb5-35584880-95214067 ″ info = // giphy.com/embed/xTiTnCEAZ0Izo7PWes width = 480 ″ height = 270 ″ frameborder = 0 ″ class = giphy-embed
Ixesha lokugqibela ugqirha wayedibene ne-comedienne yayinguCatherine Tate, owayedlala uDonna Noble ecaleni kukaGqirha weShumi kaDavid Tennant- kwaye obu budlelwane bubonwa ngabaninzi njengelona qela libalaseleyo leTARDIS.
Ngaphakathi ku-Amy Schumer ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zibalaseleyo zemizobo kule minyaka ilishumi idlulileyo nakwifilimu yakhe ka-2015 Ukwaphuka kololiwe ubonakalise ukuba unjani italente yokuhlekisa. Ixesha laseMelika kunye neNkosikazi yeNkosi / iNenekazi? Andiqinisekanga ukuba ii-Whovians ziya kuyiphatha njani kodwa ngokuqinisekileyo kuya kuba kufanelekile ukubukela.
7. UHelen Mirren
Ugqirha wangoku uPeter Capaldi ungqine ngaphandle kwesithunzi sokuthandabuza ukuba umdlali omdala angadlala ixesha leNkosi. UNks Mirren uneminyaka embalwa kwi-Scottish Time Lord kodwa usesemva kuka-Sir John Hurt, owayedlala ugqirha oyimfihlakalo wase-War Usuku lukaGqirha .
[ikhuselwe-iframe id = ba30c04c92f47c7c5a067ac64385daff-35584880-95214067 ″ info = // giphy.com/embed/T9QW3KcX2wGHK ububanzi = 480 ″ height = 360 ″ frameborder = 0 ″ class = giphy-embed allowfullscreen =]
Emuva ngo-2013, isibhengezo sangaphambi kukaCapaldi, UNks.Mirren wathi 'lixesha eligqithileyo' uGqirha wayelibhinqa, wongeza esithi, 'Ndicinga ukuba ngugqirha olifanasini, omnyama oGqirha Ngubani oyakuba ngoyena ubalaseleyo kubo bonke.'
Ngokudabukisayo, uDame uHelen naye uye wathi esidlangalaleni angathanda ukuba sisikhohlakali seBond kunoGqirha. Bah!
6. ULupita Nyong'o
Umdlali weqonga ozelwe eMexico weza kuthathelwa ingqalelo luluntu ngeqonga lakhe elikhulu lesikrini kwi Iminyaka eli-12 Ikhoboka Ukuphumelela i-Oscar ngokusebenza kwakhe njengoPatsey. Kutshanje, uNks. Nyong'o waziswa kubaphulaphuli ngokubanzi njengomlingisi owenziwe ngekhompyuter uMaz Kanata kwi Iimfazwe zeNkwenkwezi: Umkhosi uyavusa.
[ikhuselwe-iframe id = 89f79a3739ffaea9e54c344b8f41cefb-35584880-95214067 ″ info = // giphy.com/embed/MbvzqrhXitvwI width = 480 ″ height = 269 ″ frameborder = 0 ″ class = giphy-embed allowfullscreen
Ngaphandle kwamava omabonakude emva kwakhe, uLupita unokuba ngumntu oqheleke kakhulu kwihlabathi liphela njengegorha elihamba ixesha.
5. UGillian Anderson
Okwangoku kwenziwa ixesha lesithathu leedrama ezigqwesileyo Ukuwa , Kwaye umva nje emva engakholelekiyo Imfazwe noxolo , UNks Anderson ukwakwisikrini sikamabonwakude njenge-iconic Agent Scully ukusuka Iifayile ze-X .
[ikhuselwe-iframe id = 89ab8d164b704dfeafc6b9735e0faa40-35584880-95214067 ″ info = // giphy.com/embed/2oJuvP8ZOFMHu width = 480 ″ height = 326 ″ frameborder = 0 ″ class = giphy-embed allowablelscreen =]
Ukubethwa ngabalandeli be-sci-fi kwihlabathi liphela, uGillian wonwabele inani lempumelelo kunye ne-BBC kule minyaka idlulileyo, zakudala zeDickens Ulindelo olukhulu kwaye Ndlu yeBleak umzekelo.
Zine. UHayley Atwell
Akukho mntu ungaziwayo kwilizwe likaGqirha Ngubani, UNks Atwell ubonelele ngelizwi lakhe kwinani leedrama ezirekhodiweyo. Kunyaka ophelileyo, umdlali weqonga wade wathumela umyalezo kwiTwitter ukuba ufuna ukuba ngugqirha.
[ikhuselwe-iframe id = a1b05b6d5b226f3316b85458823d023f-35584880-95214067 ″ info = giphy.com / embed / 9cQgeuuStL2k8 ″]
Unyanisile naye. Umlingisi wesiNgesi, owaziwayo ngendima yakhe ekhokelayo Ummeli weMarvel Carter uthotho, ngokuqinisekileyo uya kwenza ugqirha ngokuqaqambileyo, ulutsha kunye nokuhlekisa. Ummeli uPeggy Carter wavela ngaphakathi UCaptain America: uMphindezeli wokuqala (ekwabonisa i-cameo evela kwiqabane langaphambili uJenna Coleman).
Esinye isibonelelo esihle sokuba noHayley njengeNkosi yeXesha iya kuba kukuqaqamba kwakhe ngasemva kwemiboniso yeDubSmashing antics.
3. UGemma Chan
Kanye njengokuba uPeter Capaldi wayesele ebonakele kuGqirha Ngubani ngaphambi kokuba abe nguGqirha (uCaecilius ngo-2008 Umlilo wasePompeii ), UGemma uye wahamba emajukujukwini kunye neGallifreyan. UNks Chan ubambe inkwenkwezi kwelinye ibali leGqirha leshumi, isiqendu esinoyikisayo sika-2009, Amanzi eMars .
[ikhuselwe-iframe id = 173e3496c455e5b28dc8fb4ab5edab8e-35584880-95214067 ″ info = giphy.com / embed / vS0zIUfEVfnnW]
Umdlali weqonga uchukumisile ngendima ezininzi kumabonakude (njenge USherlock kwaye Idayari eyimfihlo yeNtombazana efowunelwa kunye nalowo wayesakuba ngumfundi wakhe uBillie Piper), imidlalo yeqonga kunye nefilimu. Eyona nto ibalaseleyo, nangona kunjalo, yayiyindima yakhe ekhokelayo kuthotho lwamabali amnandi oluvela kwi-AMC kunye Umjelo weSine wase-UK, Abantu (Ikwangumnumzana uWilliam Hurt). Njani ngomlingani wesintsi oza kutshatisa?
Mbini. UGwendoline Christie
Kwakukho ixesha apho amagama Imidlalo yeethrone Ngokukhawuleza ahamba negama likaChristie kodwa ngoku, enkosi Iimfazwe zeNkwenkwezi: Umkhosi uyavusa , umdlali weqonga waziwa kwihlabathi liphela njengentombazana embi, uKapteni Phasma.
[ikhuselwe-iframe id = 4c3b8d909ab52ecedc31652efca0a238-35584880-95214067 ″ info = giphy.com / embed / HmitO4j4WiDJK]
UGwendoline sele esebenze nabanye boGqirha Owayesebenza eCardiff xa wayenenkwenkwezi njengomphambukeli uLexi kuthotho lokuqala lwezona zinto zibalaseleyo zenzululwazi yabantwana ye-BBC. Iimilozi kunye nabaphambukeli .
Ingcinga yothixokazi waseAmazon ophethe i-TARDIS inamanzi kakhulu ukudlula.
1. U-Helena Bonham Carter
Ukuba wakhe wabakho umdlali weqonga okanye umdlali weqonga ozelwe ukudlala indawo kaGqirha, ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo yi-HBC.
[ikhuselwe-iframe id = 8d2b43814a6b4295013a977fc34ef6c8-35584880-95214067 ″ info = giphy.com / embed / iTSg7L1MVTX68 ″]
Eyaziwa ngokuba ngumdlalo we-quirky kunye ne-eccentric njengeBellatrix Lestrange kwiifilimu zikaHarry Potter nanjengomama oyintombazana ohlekisayo wonyaka ophelileyo ICinderella Unksz Carter ufumene i-nous, i-gravitas kunye nemvakalelo yolonwabo olunobungozi olufuna iXesha leNkosi.
Kwaye, ukuba sinethamsanqa ngenene, i-HBC iyakucela umhlobo wakhe omdala uTim Burton ukuba angathanda na ukwalathisa isiqendu okanye ezimbini.
Ugqirha obuyela kwi-BBC America ngo-Dec 25, 2016.
Uphengululo lweDrone X Pro: Ngaba yeyona Drone yexabiso eliphantsi ephantsi kwe- $ 100?
'Daredevil' uMlungelelanisi woMlo oHlola uMatt Murdock vs. Frank Castle
Olu dliwanondlebe noLucas waseVenmo usenza ukuba sifune ukuMphosa kancinci nje
Ezona Firm zikaPR zinamandla ze2019
umcimbi wokuphindaphinda umcimbi 3 isiqendu 1
Zeziphi ezona zitya zityebileyo
Ngaba uDella reese usaphila
ezona zixhobo zokulahleka kwesisindo kwabasetyhini